CARRAA DUKKANOOFTUU Asoosama Kutaa 1ffaa-Rabbumaa Geetachoo Guddataa’tiin – Beekan Guluma Erena
CARRAA DUKKANOOFTUU Asoosama Kutaa 1ffaa-Rabbumaa Geetachoo Guddataa’tiin	Beekan Erena
CARRAA DUKKANOOFTUU Asoosama Gabaabaa
Gammachuu jedhama mucaa magaala bareeda mataa luuccaa, dheerina meetira 1.70 ta’a. Gammachuun kan dhalatee guddate Godina Shawaa Lixaa Aanaa Dandii magaalaa Ginciitti. Innis yeroo dhalatu maatii isaaf mucaa hangafaa ture. Abbaan Isaa obbo Obsaa Dheeressaa jedhamu Haatii isaa Aaddee Bashaaddu Rabbirraa jedhamu. Isaanis kan wal fuudhani bultii horatan bara 1991.ALH magaalaa Gincii dhumatti wal fuudhani. Isaanis akka hardhaa miti malee yeroo durii isaanis akkum duudha fi Aadaa oromootti margaa ergatani weedduu jaalalaa waliif sirbanii wal fuudhani.
Yeroo wal fuudhanis abdii waaqa isaan ume malee omaa hin qabani. Jaalala mi’ooftu qabatani mana tokko achum Ginciitii kireefatani waliin galuu. Isaanis erga walitti dhufani kaasani jaalalan jiruu isaani gaggefatu. Obbo Obsaanis Aadde Bashaaddunis guyyaa akkum namaatti jiruu mataa isaani hojjetani galgala mana isaanitti galani jiruu guyyaa hojjecha olan qarshi argatan walitti qabatani karoora jireenya baasu. Jidduu kanaan Gammachuun bara 1994 dhalate. Yeroo addunyaa kanatti dhufu isaaf hiikkan addunyaa hin galleef ture yeroo garaan curruuqu addunyaa bareeddu keessa waan jiraatu of se’a. Garuu hangum guddacha dhufu addunyaa dhugaa awwaalamte sobni itti daraarte, addunyaa intalli haadha dhaantu, addunyaa dhiirri surree gad butee beeka of fakkeessu, addunyaa obboleessi obboleessa ajjeese gumaa walii nyaate diina gammachiisu ta’eetu itti guddachaa dhufee.
Innis egaa waan godhu waan hin qabneef kan isa qunnamu hunda ofitti fudhate maatii isaa waliin jiruu fi jireenya gaggeessa. Gammachuun maatii harka qaldheessa keessatti waan dhalateef carraa akka ijoollee warra kaani taphate, waan garaan isaa kajeele nyaate dhuguuf carraan isaa isaaf hin eeyyamne. Huccuu inni qabuyyuu kan jilba irraan ciccittee, kan karaa taa’a isaa irraa bututtee fuulle ijaa nama kawwate fakkesite uffate ittiin oolee bula. Ijoolleen warra jiruun guuttef immoo huccuu Gammachuun kawwate ilaalani itti kolfani bashananuu. Gammachuun mana barnoota erga galee kaasee cimaa ture. Barnoota isaa amma kutaa 8 gahee qormaata biyyooleessa kutaa 8ffaa qorame firii isaa egacha jiraa. Hiriyyoonni isaa barnoota gannaa yoo baratan inni garuu carraan isaa hin eeyyamneef. Jidduu kanaan Gammachuun obboleetti argate. Obboleettin isaas Siddisee jedhamti……..
Rabbumaa Geetachoo Guddataa’tiin
← LIQIXOOFTEE HIN HAFTU-Sabaan-boon Firrisaa
DHUGUMAAREE LAATA?-Bakkasaa Tumsaa Ittaanaa →